Filoha Hery Rajaonarimampianina:DOCTEUR HONORIS CAUSA -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloha Hery Rajaonarimampianina:DOCTEUR HONORIS CAUSA
26/11/2016 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Manana ny anaram-boninahitra Docteur Honoris Causa ny filoha Hery Rajaonarimampianina ankehitriny. Ny praiminisitra Québecois Philippe Couillard no nampisalotra azy izany, omaly, nandritry ny fanamarihana ny faha-30 taonan’ny INSCAE.
Eto an-toerana manatrika ny fihaonamben’ny Frankofonia rahateo io olo-manan-kaja Québecois io.
Anaram-boninahitra ambony hatolotry ny Oniversite iray ny Docteur Honoris Causa. Nahavita be tao amin’ny INSCAE tokoa ny filoha Hery Rajaonarimampianina satria efa nampianatra tao izy. Tsara ny manamarika fa ny Oniversitean’i Québec any Trois-Rivières
( tanana iray ao Canada ) no nitantana ny INSCAE nandritra ny telo taona. Ny filoha ankehitriny ihany koa dia nahavita be tao amin’io Oniversite io satria efa nampianatra tao. Noho izany antony rehetra izany no nampisalorana azy an’ity anaram-boninahitra ambony Docteur Honoris Causa ity.
Tonga ao an-tsain’ny rehetra ihany koa ny efa nahazoan’ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana an’izany anaram-boninahitra izany, saingy ny naha samihafa azy dia voamarina tsara sy noho ny naha nahita fianarana ambony azy no nanomezana an-dRajaonarimampianina an’ity Docteur Honoris Causa ity, fa tsy nomena fotsiny mba hampifalifaliana an’ilay Filoha tahaka ny nisy taloha akory.
Amin’izao fotoana izao moa, dia nohamafisina ny fiaraha-miasan’ireto sekoly ambony roa tonta ireto ka niompana any amin’ny fanofanana ny tanora hanangana orinasa avy hatrany ny tanjona.